Ihe ederede Tim Piazza banyere Martech Zone |
Edemede site na Tim Piazza
Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ndị ọkachamara n'ahịa ịzụ ahịa iji kwurịta ma kesaa usoro maka itinye usoro mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka atụmatụ SEO. N'ụzọ doro anya, ọtụtụ azụmaahịa weebụ nke na-amalite site na engines ọchụchọ na-akwalite ugbu a site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana maka ndị na-ere ahịa na-abanye, enweghị ike ileghara nnukwu okporo ụzọ a anya. Ma, ọ bụ ihe ntụgharị uche na-adọrọ adọrọ ịdọrọ ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ n'okpuru nche anwụ nke usoro SEO. N’eziokwu, e nwere ihe ndị ị ga-emeli
WordPress mere nnukwu mmalite evolushọn na-aga n'ihu na ikpo okwu ntanetị, na-ebugharị ya nso na sistemụ njikwa ọdịnaya zuru ezu na nsuso nyocha, nkwado maka menu ọdịnala, yana – atụmatụ kachasị ịtụnanya maka nkwado m-ọtụtụ saịtị na ịdenye ngalaba. Ọ bụrụ n ’ịbụghị usoro njikwa ọdịnaya junkie, ọ dị mma. Nwere ike ịfefe gara aga edemede a. Ma maka ndị teknụzụ ibe m, ndị isi koodu na ndị na-achụ apache, achọrọ m ịkekọrịta ihe na-atọ ụtọ, na ihe dị jụụ. Multi-saịtị bụ
Everylọ ọrụ mgbasa ozi ọ bụla bịara na nke ugbua anwụọla n'ihi otu n'ime ihe abụọ, ma ọ bụ enweghị ike ịmepụta ihe ọhụrụ, ma ọ bụ enweghị ike ịchịkwa akara ngosi-na-mkpọtụ. N'ihe banyere Google, mgbaàmà ahụ bụ ezigbo nsonaazụ ọchụchọ na peeji nke mbụ na mkpọtụ bụ nsonaazụ ọchụchọ na-enweghị isi nke na-emetụta ma merụọ ọnọdụ ndị ahụ dị elu. Google agagh ibu njin nyocha ma oburu na ha akpachapuru anya banyere olu ha. N'oge na-adịbeghị anya, Google abụrụla
Facebook na-eme mkpọtụ dị jụụ iji nweta ọnụ ọgụgụ ekwentị gị. N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, ha emeela mgbanwe abụọ pụtara ìhè nke na-atụ aro nkwadebe iji chịkwaa ohere ịzụ ahịa ekwentị. Nke mbu ha bidola ịdọ aka na ntị ndị ọrụ na-enyebeghị nọmba ekwentị mkpanaaka na nchekwa Facebook ha dị ntakịrị, ihe mbụ ị ga-eme iji nwekwuo nchebe bụ inye nọmba ekwentị ahụ. Nke a na - eme ka nchekwa dịrị, dịka ndị mmadụ na - achọ
E nwere ụdị ọrụ atọ. Ndị ị nwere ike ime n'onwe gị, ndị ị ga-akwụ onye ọzọ ụgwọ ka ọ rụụrụ gị, yana ndị ị ga-achọ iso ndị ọzọ rụkọta ọrụ. Nchịkọta oru ngo njikwa maka ụdị nke atọ. Enwetara m Mavenlink n'oge na-adịbeghị anya, ngwa ọrụ nchịkwa igwe ojii nke yiri Basecamp, mana na-elekwasị anya na mkpa nke ndị ndụmọdụ na freelancers. Mavenlink na-enye gị ohere ịmepụta ọrụ,